Ọ bụrụ na gị na ike iche na ngwaọrụ ndị Apple ngwaọrụ, Android na ị chọrọ ịhụ ihe oyiyi ha na ha na ngwaọrụ na ihe oyiyi ha mgbe ahụ bụ naanị Exactspy-Image Tracking Software Free awade kasị keukwu mbiet akada inaha.
– Lee niile ihe oyiyi ha ha ngwaọrụ
– Lee niile oyiyi ugbua ha ngwaọrụ
– Na-akwado JPEG, GIF, BMP, EXIF, TIFF, Raw, PNG, PPM, PGM, PBM, PNM, ECW file formats 100MB file size limit for rapid image file uploading
Ị chọrọ ijide n'aka na gị na ụmụ gị na-adịghị eji ha ama ese foto maka na-ewere okwu rụrụ arụ foto? Ị chọrọ iji chebe ha pụọ ​​cyber-iji ike emegbu mmadụ? Ị chee na ụfọdụ n'ime gị ọrụ na-ewere foto na pụrụ ịbụ ojiji gị asọmpi? Exactspy will help you ensure nothing inappropriate is going on.
Foto ndị dị na-ekwu okwu a puku kwuru na ugbu a ị dịghị mkpa mgbe ogbi ekele Exactspy-Image Tracking Software Free ahụ na onyinyo ya akada ikike. Exactspy intelligently captures both images taken on their phone after Exactspy-Image Tracking Software Free has been installed as well as any pictures taken before Exactspy e arụnyere ekele ya akụkọ mgbasa ozi mma. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ná ndụ gị-anọgide na-foto ha na ekwentị gị mkpa iji a Ilerukwu Exactspy.
Also Exactspy can let you see other multimedia data such as video, olu memos, ndetu ...
Gị foto na-abịakọrọ na resized tupu zitere ihe nkesa na-iji belata data nyefe oge na-azọpụta gị na ngwaọrụ batrị. Ya mere,, ogo nke foto gị log nwere ike ghara ịbụ otu ihe ahụ na mbụ foto na ngwaọrụ gị.